အခမဲ့ YouTube စာရင်းသွင်းသူများ | YouTube စာရင်းသွင်းသူများကို ဝယ်ယူပါ။
YouTube Optimization ကိုဝယ်ပါ
သင့် YouTube ချန်နယ်ကို အမှန်တကယ်လူများဖြင့် လျင်မြန်စွာ တိုးပွားစေမည့် #1 ဝန်ဆောင်မှု။
SubPals သည် အခမဲ့ YouTube စာရင်းသွင်းသူများ တိုးပွားလာသည့် ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး သင့်ချန်နယ်ကို တကယ့်လူများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဖြင့် စတင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ သင်၏တိုးတက်မှုခရီးကို ယခုစတင်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့ YouTube ကိုစာရင်းပေးသွင်းထားသူများ of Service ကို Key ကိုအင်္ဂါရပ်များ
SubPals သည် ၁၂ နာရီတိုင်း YouTube နှင့်အခမဲ့ရယူသူ ၁၀ ဦး ကိုလက်ခံရန်အတွက်ဆန်းသစ်သောကွန်ယက်တစ်ခုပေးထားသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုသည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်သုံးစွဲသူများကိုပိုလိုချင်သူများအတွက်အလွန်တတ်နိုင်သောငွေပေးချေနိုင်သောရွေးစရာများပါ ၀ င်သည်။
SubPals humanly တတ်နိုင်သမျှရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ဖို့ဒီဇိုင်းခဲ့သည်! သင်၏အချိန်ကအရေးကြီးတယ်ကျနော်တို့ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ + သင်သည်သင်၏အချိန်ကိုသာစုံတွဲတစ်တွဲကိုမိနစ်အခမဲ့ YouTube ကို subscriber များအား 10 ပေးရန်ကွန်ရက်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုး, နားလည်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့ငုပ်သင်္ဘောကွန်ယက်ကိုသင်သည်အခြားယူကျု့ချန်နယ်ပိုင်ရှင်များထံမှ subscriptions ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်ဒါကြောင့်, ၎င်းတို့၏ subscriber များအားတိုးမြှင့်ဖို့ရှာဖွေနေသင်နှင့်အခြား YouTube အကြားတစ်ဦးလဲလှယ်ပေးသည်။ ဒါဟာပိုပြီး YouTube ကို subscriber များအားရဖို့ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်!
အခမဲ့ YouTube ကို subscriber များအားလက်ခံရရှိရန် SubPals အသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏ YouTube အကောင့် 100% လုံခြုံဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ကွန်ယက်ကို သိ. သုံးပါနှင့်ခပ်သိမ်းသောကာလလုံခြုံရေးအတွက်စိတ်ချယုံကြည်မှုခံစားရနိုင်ပါတယ်။
သင်သည်သင်၏ချန်နယ်အတွက်အခမဲ့သို့မဟုတ် paid အစီအစဉ်ကိုသက်ဝင်သည့်အခါ, သင်သည်သင်၏ရုပ်သံလိုင်းရဲ့စာရင်းပေးသွင်းထားသူအရေအတွက်သည်ထိုနေ့ကြီးထွားလာ start ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်! တိုင်းအစီအစဉ်ကိုသင့်ချန်နယ်ရဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုနှင့်ထိတွေ့မှုကြီးထွားဖို့လျင်မြန်စွာအလုပ်လုပ်စတင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖော်ရွေအသင်းကိုကူညီဖို့ကဒီမှာပါ! သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများကိုရှိသည်သို့မဟုတ်ဘာမှမနှင့်အတူအကူအညီလိုလျှင်, ငါတို့သည်ကွာရုံအီးမေးလ်တစ်စောင်ပါပဲ။ သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုကိုဆက်သွယ်တဲ့အခါ, သင်အမြဲအချိန်မီတုံ့ပြန်မှုကိုမျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။
အခမဲ့စာရင်းပေးသွင်းထားသူများ Get ရန်ရိုးရှင်းသောခြေလှမ်းများ
60 စက္ကန့်နောက်ပိုင်းမှာ, သင် Done ပါတယ်!
အခမဲ့ YouTube ကိုစာရင်းပေးသွင်းထားသူများ၏အရေးကြီးဆုံးအကျိုးကျေးဇူးများ၏ 10
အသက်တာ၌အကောင်းဆုံးအမှုအရာအခမဲ့ပါ၏ နှင့်လူမှုရေးမီဒီယာများ၏မြင့်တက်အတူအဘယျသို့အခမဲ့ YouTube ကို subscriber များအားထက်ပိုကောင်းပါသလဲ အိုကေ, သငျသညျဖြစ်ကောင်းပိုကောင်းဖြစ်ကြောင်းအနည်းဆုံးအနည်းငယ်သောအရာတို့ကိုအမည်နိုင်ပါတယ်; ဒါပေမယ့်အမှတ်, သင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာဆိုဒ်များတွင်အောက်ပါ, YouTube တို့ကဲ့သို့, ယနေ့ကမ်ဘာပျေါတှငျ ပို. ပို. အရေးကြီးသောဖြစ်လာသည်ဖြစ်ပါတယ်။
"YouTube မှာအလွန်များစွာသောအကြောင်းအရာရှိပါတယ်။ လူတိုင်းအတွက်တကယ်တော့တစ်ခုခုရှိတယ်။ ပြီးတော့လူတွေကကျွန်တော့်ဆီကိုအမြဲတမ်းလာပြီး YouTube ကသူတို့ရဲ့ဘဝကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်၊ သူတို့လေ့လာသင်ယူလို့မရဘူးတဲ့အရာတစ်ခုကိုဘယ်လိုသင်ယူနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော့်ကိုပြောပြကြတယ်။ ”
ငါးဘီလီယံ။ ၎င်းသည် site ပေါ်တွင်ယနေ့ထိဝေမျှထားသော YouTube ဗီဒီယိုအရေအတွက်ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးကတည်းကလူကြိုက်များသောဗွီဒီယိုဝေမျှခြင်းပလက်ဖောင်းသည်စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသောအမြန်နှုန်းဖြင့်အကြောင်းအရာသစ်များကိုဖန်တီးပေးသောသုံးစွဲသူအသစ်များကိုဆက်လက်ဆွဲဆောင်လျက်ရှိသည်။ YouTube နှင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် Valentine's Day တွင်ဖန်တီးခဲ့ခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပါ။ အသုံးပြုသူများသည်အဆက်အသွယ်မပြတ်ရှိနေရန်နှင့်သတင်းအချက်အလတ်များရရှိရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော tool တစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက်နားလည်ရန်လွယ်ကူသည်။
Pew Research Center ၏အဆိုအရအရွယ်ရောက်သူ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည် YouTube ကိုသတင်းများအတွက်ပုံမှန်အရင်းအမြစ်အဖြစ်အသုံးပြုကြသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ ၎င်းသည် YouTube အား Facebook အတွက်နောက်ကျသောလူမှုမီဒီယာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအသုံးပြုသူ ၄၃ ရာခိုင်နှုန်းသည်၎င်းတို့၏သတင်းများရရန်ဆိုကြသည်။ ထို့အပြင် Omnicore ၏အဆိုအရအနှစ်တစ်ထောင် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် YouTube ဗီဒီယိုများကိုရိုးရာရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုခြင်းထက်ပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။
အဘယ်ကြောင့်လူအခမဲ့ YouTube ကိုနောက်လိုက်နှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိသည်, ကနေသူတို့ရဲ့သတင်းရဘယ်မှာသနည်း ကောင်းပြီ, ဒါကြောင့် YouTube ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအပေါ်ရှိပါတယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအပြည့်အဝနားလည်မှုရှိသည်ဖို့ကောင်းတစ်ဦးအယူအဆရဲ့, ငါတို့ယဉ်ကျေးမှုကိုသတင်းအချက်အလက်ထဲမှာကြာဘယ်လောက်။ ဤအသိပညာနှင့်အတူ, သငျသညျကိုထိရောက်စွာသငျ့ပရိသတျကိုရောက်ရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
အဆိုပါစာရင်းဇယားပိုပိုပြီးလူတွေကမ္ဘာပေါ်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအကြောင်းကိုသင်ယူဖို့ YouTube ကဲ့သို့က်ဘ်ဆိုက်များမှလှည့်ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြပေမယ့်အဲဒီမှာကိုရပ်တန့်မထားဘူး။ YouTube အသုံးပြုသူများအလင်းလ်တာ install ဖို့ဘယ်လိုကနေထား-အပေါ်မည်သို့-မိတ်ကပ်ဖို့အရာအားလုံးအပေါ်အချက်အလက်များ၏အပိုင်းပိုင်းအမျိုးမျိုးတို့ကိုသင်ယူနေကြသည်။ ယခုမူကား, ပိုမိုဒါယခင်ကထက်အသုံးပြုသူများစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အမှတ်တံဆိပ်အကြောင်းကိုသင်ယူဖို့ YouTube ဗီဒီယိုစောင့်ကြည့်နေကြသည်။
ဒါဟာသင့်ကုမ္ပဏီမြှင့်တင်ရန်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောနေရာအရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီဒီယိုကိုဇာတ်လမ်းပြောပြစံပြသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး၏ပေါင်းစပ်နှင့်ဗွီဒီယိုများအချိန်အတိုဆုံးပမာဏကိုအများဆုံးသတင်းအချက်အလက်ကယ်နှုတ်တော်မူကြောင်းကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ YouTube မှတဆင့်, သင်သည်သင်၏ပရိသတ်ကိုသင့်ကုမ္ပဏီယဉ်ကျေးမှုသို့သီးသန့်ကြည့်ပြသကြပြီးပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးပုံနှိပ်သို့မဟုတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြော်ငြာကနေရမဟုတ်ဘူးသတင်းအချက်အလက်မျှဝေဖို့ရ။
YouTube သည်လက်ရှိနှင့်အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သော်လည်းသင်ပြိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၆၃ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည် YouTube ကို၎င်းတို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗျူဟာတွင်ထည့်သွင်းထားပြီးဖြစ်သည်။
သတင်းအချက်အလက်အမြောက်အများကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်ဆိုဒ်မှတစ်ဆင့်လည်ပတ်စေသည်။ ထင်ရှားရန်မဖြစ်နိုင်သလောက်။ မိနစ်တိုင်းမှာနာရီ ၃၀၀ နီးပါးဗွီဒီယိုတင်ထားတယ်။ သင်ကသင်္ချာလုပ်ရင်တစ်နေ့ကိုနာရီ ၄၀၀,၀၀၀ ကျော်ရှိပြီးတစ်နှစ်ကိုနာရီ ၁၅၈,၀၀၀,၀၀၀ နီးပါးရှိတယ်။ ၂၀၁၈ တစ်ခုတည်းအတွက်အကောင့်ဖွင့်ရန် YouTube ဗီဒီယိုများကြည့်ရှုရန်အနှစ် ၁၈၀၀၀ ကိုသင်သုံးစွဲရမည်။ ပုံရလား
ကြှနျုပျတို့သညျဤအတူတာပေါ့ဘယ်မှာသင်မြင်; YouTube ပေါ်မှာအခမဲ့ subscriber များအားရရန်ရှစ်အရေးအပါဆုံးအကြောင်းပြချက်များအတွက်အပေါ်ကိုဖတ်ပါ။
အခမဲ့ subscriber များအားရဖို့ပထမဦးဆုံးအကြောင်းပြချက်ရှာဖို့ခပ်လွယ်လွယ်-သင်တစ်ဦးထက်ပိုသောသိသိသာသာရုပ်သံလိုင်းအောက်ပါအချက်များကိုတည်ဆောက်ချင်ပါ! သင်တစ်ဦးအသုံးပြုသူအသစ်ပါပဲ, ဒါမှမဟုတ်သင်ပြီးသားတစ်ယူကျု့ချန်နယ်များပေမယ့်ဒုက္ခဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲရရှိမှုရှိမရှိ, အခြို့အပိုဆောင်း subscriber များအားခိုင်မာတဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့်ကျန်းမာအောက်ပါအချက်များကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရှည်လျားသောလမ်းကိုသွားနိုင်ပါတယ်။
YouTube ရဲ့ algorithm ကိုကျယ်ပြန့်ပရိသတ်ကိုသူတို့ရဲ့ content တွေကိုပြသနေဖြင့်စာရင်းပေးသွင်းထားသူတွေအများကြီးချန်နယ်နှာ။ သင့်ရဲ့ရုပ်သံလိုင်းကြည့်ရှုခဲ့သူကိုပိုလူများ, ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ကသူတို့အဖြစ်ကောင်းစွာကြောင့်စာရင်းသွင်းမည်ကိုကြောင့်ဒါက snowball အကျိုးသက်ရောက်မှုဖန်တီးပေးပါတယ်။
ထွက်ရှိပါတယ်အများစုမှာလူမှုမီဒီယာဆိုဒ်များတစ်ခုချင်းစီကိုအသုံးပြုသူများအတွက်အတူတကွချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ ဤသည်ပလက်ဖောင်းကိုဖြတ်ပြီးအကြောင်းအရာဝေမျှဖို့ကစူပါလွယ်ကူစေသည်နှင့်အဆသငျ့ပရိသတျ၏အရွယ်အစားကိုတိုးမြှင့်။ ဗီဒီယိုတစ်ကားကို YouTube ပေါ်မှာလူကြိုက်များသည်ဆိုပါက, စာရင်းသွင်းသူများဟာသူတို့ရဲ့အခြားလူမှုရေးမီဒီယာအကောင့်မှဗီဒီယို post လိမ့်မည်ဟုတစ်ဦးသည်အလွန်အမင်းမြင့်မားတဲ့အခွင့်အလမ်းလည်းမရှိ။ ပိုများသော YouTube ကို subscriber များအားအလားအလာတခြားပလက်ဖောင်းရန်သင့်ဗီဒီယိုများပျံ့နှံ့ကူညီနိုငျတဲ့သူကိုပိုပြီးလူတွေကိုဆိုလိုတာ။ မကြာခင်မှာပဲဗီဒီယိုနေရာတိုင်းထင်ရသောဖြစ်တယ်, သင်ပင်ဗိုင်းရပ်စ်သွား၏အခွင့်အလမ်းရပ်တယ်။
YouTuber ရဲ့အိပ်မက်တိုင်းပါပဲ။ ဗိုင်းရပ်စ်ကိုကူးယူပါ၊ သန်းပေါင်းများစွာသောသင့်အကြောင်းအရာများကိုကြည့်ရှုပါ၊ “ Charlie Bit My Finger” နှင့်“ Harlem Shake” ကဲ့သို့သောကျွန်ုပ်တို့ခေတ်၏ထင်ရှားသောဗွီဒီယိုများနှင့်အတူ YouTube သမိုင်းတွင်သွားပါ။ ၎င်းသည်“ ၁၅ မိနစ်ကျော်ကြားမှု” ဟုထင်ရသော်လည်းလက်တွေ့တွင်စားသုံးသူများစွာသည်ကုန်ပစ္စည်းများအားကြည့်ရှုခြင်းနှင့်၎င်းတို့ကိုဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်လေ့လာပြီးနောက်ဝယ်ယူမှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်သည်။
တစ်ခါတစ်ရံတွင် အချို့သောအရာများ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဝင်ရခြင်းမှာ ဆန်းကြယ်သော်လည်း ယေဘုယျအားဖြင့် ပြောရလျှင် လူသတ်သမားပါဝင်သည့် အရည်အသွေးမြင့် ဗီဒီယိုများကို သတိပြုမိတတ်သည်။ သို့သော် သင့်ဗီဒီယိုများကို မည်မျှပင် လက်ရာမြောက်စွာ ပြုစုထားပါစေ သင့်တွင် သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော စာရင်းသွင်းသူအရေအတွက်မရှိပါက သင့်ဗီဒီယိုများကို မည်သူမဆို မြင်နိုင်မည်မှာ သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိပါသည်။ နောက်လိုက်များ ပိုများလာခြင်း ဆိုသည်မှာ သင်၏ YouTube ချန်နယ်ကို YouTuber ၏ "အကြံပြုထားသော အကြောင်းအရာများ" တွင် ပိုမိုထင်ရှားလာမည်ဖြစ်သည်။ ထိုနှင်းဘောလုံးအကျိုးသက်ရောက်မှု ပျောက်ကွယ်သွားပြီး ၎င်းကို သင်မသိမီတွင် သင့်အမှတ်တံဆိပ်၏ဗီဒီယိုများကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ လူသန်းပေါင်းများစွာက မျှဝေလျက်ရှိသည်။ အခမဲ့ YouTube စာရင်းသွင်းသူများကို ရယူခြင်းသည် ပထမခြေလှမ်းမျှသာဖြစ်သည်။ YouTube စာရင်းသွင်းသူများကို ဝယ်ယူရန် ဆုံးဖြတ်ပါက၊ ၎င်းတို့ကို အနည်းဆုံး နှစ်ပေါင်းများစွာ လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး အရည်အသွေးမြင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးဆောင်မှုအတွက် နာမည်ကောင်းရှိသည့် ကျော်ကြားသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ ၎င်းတို့ကို ဝယ်ယူရန် သေချာပါစေ။
ဒါကြောင့်ကမ္ဘာဂြိုဟ်တွင်နေထိုင်ကြသောလူတိုင်းနီးပါးမှအသံတစ်သံပေးသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ social media ကြီးလှ၏။ မည်သူမဆိုခလုတ်များ၏ထိတွေ့မှုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အမြင်မျှဝေနိုင်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်အကောင်းအားဖြင့်လည်းမကောင်းတဲ့လာနှင့်အသုံးပြုသူများကိုသူတို့ရဲ့ပရိသတ်ကိုအဖြစ်တစ်ခုလုံးကိုကမ္ဘာနှင့်မကောင်းတဲ့-ပါးစပ်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုပင် သာ. ကြီးမြတ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ သင်သည်သင်၏ video အဆင့်ကိုထိခိုက်ပြီအချို့အပျက်သဘောဆောင်သောမှတ်ချက်များကိုဆည်းပူးင့်လျှင်, သင်၏စာရင်းပေးသွင်းထားသူအရေအတွက်တိုးပွားလာသည်ဤတန်ပြန်ဖို့ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာလူမှုရေးသက်သေကိုခေါ်, ထိုသို့လူသားမြားသညျအဘယျသို့ပွုပါရန်နှင့်အဘယ်သို့ပြုကြဖို့မသင်ယူဘယ်လိုဖွင့်ပါတယ်။ လူတွေကသူတို့လွန်းနဲ့တူအခြားလူများထင်တစ်ခုခုကိုကြိုက်ဖို့ပိုရှိုဖြစ်ကြသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အဖြစ်ကောင်းစွာမှန်ပေ၏ သူတို့လညျးကအခြားလူသဘောမတူတွေ့မြင်လျှင်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်မကောင်းတဲ့သို့မဟုတ်လူကြိုက်တစ်ခုခုစီရင်မည်။ YouTube ကို subscriber များအားအပြုသဘောဆောင်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များအဖြစ်သူတို့ထဲကထင်, သင့်မျက်နှာသာအတွက်မဲကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ သင့်ရဲ့ရုပ်သံလိုင်းအနည်းငယ်လူကြိုက်ဗီဒီယိုများရှိပါတယ်ဒါပေမယ့် subscriber များအား၏မြင့်မားသောအရေအတွက်ကိုရှိပြီးရင်တောင်အခြားအသုံးပြုသူများသည်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်လူကြိုက်များကြောင်းယူဆ, ဒီမှာအဲဒီမှာအနည်းငယ်နှစ်သက်ရာခှငျ့လှတျဖို့ကပိုများပါတယ်ပါလိမ့်မယ်။
သူတို့အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကနေတူသောသာအနည်းငယ် subscribers တွေနဲ့ YouTube ချန်နယ်ကြည့်ရှုပါ။ လူတိုင်းသစ်ကို "က" အစက်အပြောက်ကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးဖြစ်လိုလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နယူးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနေဆဲဖောက်သည်များကိုဆွဲဆောင်။ သင်တစ်ဦးကြီးတွေစာရင်းပေးသွင်းထားသူစာရင်းကိုတညျဆောကျမယျဆိုရငျမွမှေုနျ့ကိုငြိမ်းပြီးနောက်ဒါပေမယ့်လူတွေကသင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုခုချွတ်ယွင်းလည်းမရှိစဉ်းစားရန်သွားကြသည်။ သငျသညျအခမဲ့ YouTube ကိုနောက်လိုက် get လျှင်ရှည်လျားသောအလုံအလောက်သူ့ဟာသူတစ်လျောက်ပတ်သောနာမတျောကိုစေလှည့်ပတ်ခဲ့ရဲ့တူ, သင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကြည့်ရှုသည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ဖောက်သည်များနှင့်အတူယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရန်နှင့်သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဘို့ပိုပြီးထုတ်ကုန်ရောင်းချခြင်းသင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။
ပျိုးထောင်ရမည်သင်၏ YouTube အောက်ပါလိုအပ်ချက်များ
ရုံမဆိုကြားဆက်ဆံရေးကဲ့သို့အောက်ပါကျန်းမာလူမှုမီဒီယာကိုတည်ဆောက်မယ့်ဧရာမကတိကဝတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့်, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို၎င်းတို့၏လူမှုမီဒီယာအကောင့်ကိုစီမံခန့်ခွဲသူကိုဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်များကမြှုပ်နှံကြပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်ဤလူအခမဲ့အလုပ်လုပ်ကြပါဘူး။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုနှစ်စဉ်လစာနှင့်အကျိုးအမြတ်ကိုဖုံးလွှမ်းရန်ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဖြုန်းတက်အဆုံးသတ်နှင့်သင်တုန်း-ပါးလွှာမာဂျင်နှင့်အတူသစ်ကိုကုမ္ပဏီများသည်မကြာခဏတက်မထားနိုင်ပါ။
ဒါဟာသင်သတိပြုမိဖို့လိုလျှင်လတ်တလောတွင် YouTube မှဗီဒီယိုများ post ဖို့လုံလောက်တဲ့မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သိသိသာသာလူမှုမီဒီယာရှေ့မှောက်တွင်ထိန်းသိမ်းခြင်းအချိန်ပြည့်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတက်ကြွစွာသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအမှန်တကယ်လူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်နီးပါးလျှင်အဖြစ်, ရှယ်ယာ post များနှင့်မှတ်ချက်ပေးရန်, တူ, အမြင်, သင်၏ပရိသတ်ကိုနှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အချိန်နှင့်စွမ်းအင်လိုအပ်သည်။ ဒါပေမယ့် YouTube ကိုထိုကဲ့သို့သောအဖိုးတန် tool ကိုမှန်ကန်စေသည်ကြောင်းကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်နက်ရှင်ပဲ! သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း YouTube ပေါ်မှာဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်အဘယ်သူမျှမမေးခှနျးကရှိတယ်, ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုသင်တာဝန်ကိုင်တွယ်ရန်တာပေါ့ဘယ်လိုကိစ္စပါပဲ။
သင့်အနေဖြင့်အကြီးအကျယ်စီမံကိန်းကိုအပေါ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယူနိုင်ကြောင်း, ဒါပေမယ့်သင်ကလည်းသင့်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုတောင်းဆိုအခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အများအပြားရှိသည်။ အခမဲ့ YouTube ကို subscriber များအားရယူခြင်းသင့်ရဲ့ပခုံးကိုချွတ်ခြစ်ရာမှသင်၏ YouTube ကိုရှေ့တော်မှောက်ကိုတည်ဆောက်ခြင်း၏ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကြာပါသည်။ သင်သည်သင်၏နောက်လိုက်များပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးယူနေကြသည်ဟုသိမှတ်လွယ်ကူသောငြိမ်ဝပ်စွာနေပြန်ဝေဖန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစပျိုးအာရုံစိုက်ရနိုငျသညျ။
ကျနော်တို့ပြီးသား YouTube ရဲ့ algorithm ကိုကျယ်ပြန့်ပရိသတ်ကိုဖို့ကဖော်ထုတ်နေဖြင့်စာရင်းပေးသွင်းထားသူအများကြီးချန်နယ်နှာကိုဘယ်လိုအကြောင်းဟောပြောသည်။ ဒီအပိုင်းကဤလမ်းကြောင်းများရှာဖွေမှုများကိုများတွင်အဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ဘယ်မှာနှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ ဒါဟာဤကဲ့သို့သောင်ရဲ့သင်လတ်ဆတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ချက်ပြုတ်ဘို့လူသိများသောစားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ပိုင်ဆိုင်ဆိုပါစို့။ သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း '' ယူကျု့ချန်နယ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုဆင်းချောကျိကျိဇွန်းထက်နည်းပါးလာတဲ့ subscribers ရှိပါက, ၎င်းတို့၏ဗီဒီယိုများသင့်ရဲ့ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလသုပ်အသားစား၏အပြင်းထန်ဆုံးအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်လျှင်ပင်ဥစ္စာထက်ရှာဖွေမှုများကိုအဆင့်မြင့်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့နေပါစေဘယ်လောက်ကောင်းသင့်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကို, စာရင်းသွင်းသူများတစ်ဦးအနိမ့်အရေအတွက်ကိုအားဖြင့်သင်တို့ကိုအငယျဆုံးသောအမှတ်တံဆိပ်မှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆုံးရှုံးများ၏အန္တရာယ်ကို run ။
သင်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်အလွန်ခက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်, သင်သတိပြုမိရသေချာအောင်ချင်တယ်။ YouTube ကို subscriber များအားရယူခြင်းသင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ရှာဖွေမှုများကိုထဲမှာစာရင်း၏ထိပ်မှာပေါ်လာမည်, သင်၏အကြောင်းအရာယှဉ်ပြိုင် outshines ကြောင်းသေချာစေရန်ကူညီပေးပါမည်။
YouTube ကိုစျေးကွက်များအတွက်ထိုကဲ့သို့သောအဖိုးတန်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ ရုပ်သံလိုင်း subscriber များအားရယူခြင်းလူတွေနေ့တိုင်းသင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်ကိုကြည့်ဖို့ sign up ကိုရှိခြင်းနှင့်တူ၏။ YouTube ကိုမဆိုစျေးကွက်မဟာဗျူဟာတစ်ခုမရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်အခမဲ့ YouTube ကိုစာရင်းပေးသွင်းထားသူများရတဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံးထားရှိမည်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုတစျဦးဖွစျသညျမသာ။ သငျသညျကို non-အော်ဂဲနစ်စာရင်းသွင်းသူများနှင့်နောက်လိုက်များနှင့်အတူထွက်အဲဒီမှာအကောင့်များ၏အရေအတွက်မှာအံ့အားသင့်လိမ့်မယ်။ မော်ဒယ်, racecar drivers တွေကိုတောင်မှနိုင်ငံရေးသမားများ, အပေါင်းတို့သည်မိမိတို့အကောင့် YouTube ကို subscriber များအားဆည်းပူးခဲ့ကြပြီးညာဘက်ကိုသူတို့မျက်မှောက်၌၎င်းတို့၏ရုပ်သံလိုင်းလူကြိုက်များတိုးစောင့်ကြည့်နေကြသည်။
ကျွန်တော်တို့အများစုဟာ Facebook ကနေအခမဲ့ကြော်ငြာအကြွေးကိုဆည်းပူးကြပါပြီ။ ဒါဟာတူညီတဲ့အရာပါပဲ။ သင့်ရဲ့ subscriber များအားတိုးမြှင့်မှုအတွက်အလားအလာနည်းလမ်းများဖြစ်ကြသည်နှစ်ဦးစလုံးရာ၏, Facebook ပေါ်မှာတစ် post ကိုတိုးမြှင်တူသောနောက်လိုက်ရတဲ့၏စဉ်းစားပါ။ တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်က Facebook နဲ့အခြား sites များအပေါ်ရေးသားချက်များတိုးမြှင်ဖြစ်ပါသည်သင်ကနောက်လိုက်သို့မဟုတ်ပင်ပုံမှန်တွေ့ဆုံမှုတစ်ခုအခြို့သောအရေအတွက်ကအာမခံချက်မရှိပါသောကွောငျ့အန္တရာယ်များသည်။
မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဲ့သို့ပင်, သင်သည်သင်၏အောက်ဆုံးလိုင်းတိုးမြှင့်ဖို့ချင်တယ်။ YouTube မှသင့်အမှတ်တံဆိပ်အကြောင်းကိုဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ဗီဒီယိုများဝေမျှခြင်းအားဖြင့်အသက်အဘို့ဖောက်သည်သို့အလားအလာဝယ်လက်ပြောင်းပြီးပြည့်စုံသောပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုမှတက်စေပါတယ်။ အခမဲ့ YouTube ကို subscribers တွေနဲ့, သင်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ပိုပြီးသိသိသာသာအောက်ပါအချက်များကိုတည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ ထိုအရပ်မှ, သင့်ဗီဒီယိုများ Facebook မှာကဲ့သို့အခြားဆိုက်များပျံ့နှံ့နိုင်ပြီး, သငျသညျဗိုင်းရပ်စ်သွား၏အခွင့်အလမ်းရပ်; နှင့်စားသုံးသူသန်းပေါင်းများစွာရန်သင့်အမှတ်တံဆိပ်ဖော်ထုတ်။ ငါတို့ကဲ့သို့ကောင်းစွာအခြားအကြိုးခံစားခှငျ့ကြည့်ပေမယ့်အဘယ်အရာကိုတိုင်းအကြောင်းပြချက်မှဆင်းအနာဆိုးသည်သင်၏ YouTube စာရင်းပေးသွင်းထားသူအရေအတွက်တိုးပွားလာတိုးမြှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝင်ငွေဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။
ဟလို ... ကအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်!
အခွင့်အလမ်းတွေကိုဤဆောင်းပါး၏ခေါင်းစဉ်သည်သင်၏အကျိုးစီးပွား piqued ။ အခမဲ့ယူကျုးဘစ်သုံးစွဲသူများသည်ရှားပါးသောရှာဖွေမှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကုမ္ပဏီများလည်းရှိသည်။ ဤအရာသည်သင်၏အကောင့်ကို spam ပြုလုပ်သော bot များသာမဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့သည်သင်၏စာရင်းပေးသွင်းသူအရေအတွက်ကိုပုံမှန်တိုးမြှင့်နိုင်ရန်နှင့်သင်၏စီးပွားရေးကိုထိုနေရာတွင်ရရှိရန်ကူညီသောအမှန်တကယ်အသုံးပြုသူများဖြစ်သည်။
Susan Wojcicki ပြောတာကအမှန်ပဲ၊ YouTube မှာလူတိုင်းအတွက်တစ်ခုခုရှိတယ်။ သို့သော် YouTube ၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းသည်တစ်ခုခုဖြစ်ရန်မလုံလောက်ပါ တစ်စုံတစ်ယောက် , သင်တို့အဘို့အရာတစ်ခုခုဖြစ်ဖို့ကွိုးစားသငျ့တယျ လူတိုင်း ။ ဒါကြောင့်အသံစခွေငျးငှါသကဲ့သို့ထူးဆန်းတဲ့, Youtube ကွန်ယက်ကိုရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ပင် cable ကိုထက်ပိုပြီးလူကြိုက်များဖြစ်လာသည်။ ဒါကြောင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏နေ့-to-နေ့ 'ဘဝတွေကို "သို့သူတို့ကိုငါပေးအနီးကပ်ကြည့်ကြောင့်အသုံးပြုသူများပလက်ဖောင်းများနှင့်သူတို့နောက်ကိုလိုက်သည့်လမ်းကြောင်းများနှင့်အတူထူးခြားတဲ့ဆက်သွယ်မှုခံစားရသည်။ အခမဲ့ YouTube ကို subscriber များအားရယူခြင်းခုန်-start ရန်သင့် YouTube ရှိနေခြင်းနှင့်စီးပွားရေးအောင်မြင်မှုတံခါးကိုဖွင့်ကိုအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့အခမဲ့ YouTube ကိုစာရင်းပေးသွင်းထားသူများအစာရှောင်ခြင်း Get ယနေ့ YouTube ကိုကျော်ကြားမှုရန်သင့်ခရီးစတင်ပါ!
19th မေလ 2022
သင့် YouTube အကောင့်တွင် Spam မှတ်ချက်ပေးသူများကို မည်သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမည်နည်း။
တစ်ချိန်က YouTube သည် အခြားသော ဗီဒီယို ထုတ်လွှင့်ခြင်း ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုသာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဲဒီတုန်းက စပမ်းထုတ်တာမျိုးတွေ မရှိသလောက်ပါပဲ။ သို့သော် အရှိန်အဟုန်ပြင်းစွာ ပြောင်းလဲသွားသောအခါ...
10th မေလ 2022
YouTube မူပိုင်ခွင့်တောင်းဆိုမှုများနှင့် YouTube ချိုးဖောက်မှုများ
မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေများသည် အမြဲတမ်းရိုးရှင်းပြီး ရိုးရှင်းသည်မဟုတ်ပါ၊ အထူးသဖြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နေရာလွတ်တွင်ဖြစ်သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်အခွင့်အရေးများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းသည် ရွေ့လျားနေသော အစိတ်အပိုင်းများစွာဖြင့် လာပါသည်။ နားလည်မှုတွေ တိုးလာပေမယ့်...
29th ဧပြီလ 2022
YouTube စီမံကိန်းလမ်းညွှန်- လျင်မြန်စွာ တိုးတက်မှုအတွက် တသမတ်တည်း အကြောင်းအရာ ဖန်တီးပါ။
YouTube ၏ အောင်မြင်မှုဆီသို့ လမ်းကြောင်းသည် အတားအဆီးများနှင့် အတားအဆီးများ ပြည့်နှက်နေသည်။ ကော်ပိုရိတ်နှင့် တစ်ဉီးချင်း ဖန်တီးသူများ၏ ပြိုင်ဆိုင်မှု မြင့်တက်လာခြင်းကြောင့် နယ်ပယ်တွင် သင့်ကိုယ်သင် နာမည်ရစေမည့်...
SubPals တွင် ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထူးခြားသောဝန်ဆောင်မှုနှင့် တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းများဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ဂုဏ်ယူပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စကားလုံးအတွက်သာ မယူလိုက်ပါနှင့် - အောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖောက်သည်များ၏ သုံးသပ်ချက်များကို ကြည့်ပါ။
ကျွန်ုပ်သည် အကြောင်းအရာဖန်တီးသူဖြစ်ပါသည်၊ Subpals သည် ကျွန်ုပ်၏ချန်နယ်သို့ စာရင်းသွင်းသူများကို 12 နာရီတိုင်း ပေါင်းထည့်ထားသောကြောင့် ၎င်းသည် အမှန်တကယ် အထောက်အကူဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
လှုံ့ဆော်မှုလိုအပ်သော youtubers များကြီးထွားလာရန်အတွက် ဤဝဘ်ဆိုဒ်သည် ကောင်းမွန်ပါသည်။ စာရင်းသွင်းသူ 80 နဲ့ စတင်ခဲ့ပြီး အခု 500 ရှိပါပြီ။
SubPals ကို တိုက်မိသောအခါ အင်တာနက်ပေါ်ရှိ ကျွန်ုပ်၏ YouTube ချန်နယ်အတွက် စာရင်းသွင်းသူများရရှိရန် အကြံပြုချက်လေးများ ရှာဖွေနေပြီး ၎င်းသည် လိမ်လည်မှုတစ်ခုဖြစ်မည်ဟု ထင်ကာ အမှန်တကယ်ပင် အနည်းငယ် နောက်ပြန်ဆုတ်နေပါသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း စာရင်းသွင်းသူ ဆယ်ယောက်ကို ကောင်းကောင်းရနိုင်ခဲ့တယ်။ ငါအထူးအကြံပြုလိုသည်မှာ၊ ထို့အပြင် သင်သည် ၎င်းတို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကို တစ်နေ့တစ်ကြိမ် အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်ပါသည် ;)
ကောင်းမွန်သောဝဘ်ဆိုဒ်၊ သင်သည် အခမဲ့စာရင်းသွင်းမှုများကို ရယူလိုက်ပါ။ ပြီးတော့ ဗိုင်းရပ်စ်လည်း မရှိဘူး။ အရမ်းကောင်းတယ်။ ဤဝဘ်ဆိုဒ်ကိုကြည့်ပါ။ ယခု!
- ထရစ်စတန် မီတာ၊
အလွန်ကောင်းမွန်သော စျေးနှုန်းဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ စာရင်းသွင်းမှုအခြေခံမော်ဒယ်ကို နှစ်သက်သည်။ ကြည့်ရှုမှုများနှင့် အပိုင်းများသည် အော်ဂဲနစ်ဖြစ်သည်။
၎င်းကို သင်ကိုယ်တိုင် စတင်အသုံးပြုနိုင်ရန် လိုအပ်သော်လည်း ၎င်းကို သင်ကိုယ်တိုင် စတင်အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော်လည်း သင့်အား 10subs တစ်ကြိမ် အနည်းဆုံး 12subs ပေးသည့် အခမဲ့အစီအစဉ်သို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ရရန် နာရီဝက်ခန့်ကြာပါသည်။ ၎င်းတို့၏ yt ချန်နယ်ကို ချဲ့ထွင်လိုသော လူသစ်များအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။ ဆိုက်သည် သွားလာရန် လွယ်ကူသည်။
အပြင်ရှိ ဝဘ်ဆိုဒ်ခွဲများအတွက် Youtube ခွဲများအားလုံးထဲမှ Subpals သည် အကောင်းဆုံးဖြစ်ရမည်၊ 12 နာရီတိုင်းတွင် စာရင်းသွင်းသူ 10 ယောက်ကို ခွဲထုတ်နိုင်သည်မှာ တော်တော့်ကို မျှတပါသည်၊ အချို့သောလူများသည် စာရင်းသွင်းခြင်းကို ဖြုတ်ပစ်ကြမည်မှာ သေချာပါသည်။ ၊ ကျွန်ုပ်သည် ယခင်က အပေါင်းအသင်းငယ်များကို အသုံးပြုခဲ့ပြီး ကျွန်ုပ်၏ အတွေ့အကြုံအရ၊ ၎င်းသည် YouTube စာရင်းသွင်းသူများ ရရှိရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
- Lunar X
အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် subs နှင့် likes အများအပြားရရှိထားသောဤ site သည်တကယ်အစစ်အမှန်ဖြစ်သည်ကိုမယုံနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
အကောင်းဆုံး အကောင်းဆုံး၊ လူတိုင်းအတွက် အထူးအကြံပြုထားသည်။ သူတို့ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို သုံးပါ ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ ချန်နယ်အတွက် စာရင်းသွင်းမှုကို ပုံမှန်ရရှိနေပါသည်။ ။
youtube တွင် စာရင်းသွင်းသူများရရှိရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ အချိန်အနည်းငယ်ကြာသော်လည်း ၎င်းသည် အသုံးဝင်ပြီး အလုပ်ဖြစ်သဖြင့် ၎င်းကို အကြံပြုလိုပါသည်။
စာရင်းသွင်းသူများသည် ကျွန်ုပ်တို့ subpals.com မှရရှိသော အမှန်တကယ်ဖြစ်သည်။ YouTube ချန်နယ် ပရိုမိုးရှင်းအတွက် subpals.com တွင် အလုပ်လုပ်ရန် သင့်ကို အကြံပြုပါမည်။ ကျေးဇူးပါ။
ကျွန်ုပ်၏ချန်နယ်ကို ကြီးထွားလာစေရန် ကူညီပေးသည့် အလွန်ကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခု။ တကယ်ကို အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ အပတ်စဉ် လက်ဆောင်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ youtube ချန်နယ် JE Imposters သည် SubPals မှ စာရင်းသွင်းသူ အများအပြား ရရှိခဲ့သည်။ ကျွန်တော် ပို့စ်တင်တာ တစ်ပတ်ပဲရှိတော့ subs 30 like ရှိပြီးသားပါ။ အံ့သြစရာကောင်းသလို ဒီဆိုက်က တကယ်အလုပ်လုပ်ပြီး အဲဒါကို အရမ်းအကြံပြုပါတယ်။
အရမ်းကောင်းတယ်၊ အရောင်းမြှင့်တင်တာကို တကယ်လုပ်ခဲ့တာ အရမ်းဝမ်းသာတယ်။ ၎င်းတို့သည် သင့်အား မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း စာရင်းသွင်းမှုပေး၍ အလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရပုံရသည်။
စတင်သူများအတွက် အထူးကောင်းမွန်သော ပလပ်ဖောင်း။
ဒီ website ကို အရမ်းချစ်တယ်။ အချို့သောလူများကို ကြိုက်နှစ်သက်ပြီး စာရင်းသွင်းထားရုံဖြင့် အခမဲ့စာရင်းသွင်းသူများ ရရှိနိုင်ပါသည်။
အခုသုံးနေတာ နှစ်ပတ်ရှိပြီမို့ ပြဿနာမရှိလို့ သုံးရတာ အရမ်းလုံခြုံပါတယ်။ ဒါကြောင့် နည်းနည်းမြန်အောင် ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေ ဒီဆိုက်ကို သွားသုံးသင့်တယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
အလွန်ကောင်းသည်၊ 100% အကြံပြုသည်၊ စုံလင်စွာအလုပ်လုပ်သည်၊ ကြီးပြင်းလိုပါက၊ ဤသည်မှာသင်၏ဝဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်သည်။ youtube အတွက် အကြံပြုလိုပါတယ်။
အကောင်းဆုံးဝဘ်ဆိုဒ်။ ထပ်ကြိုးစားပါဦးမည်။ သင့်ချန်နယ်အတွက် အကူအညီလိုအပ်ပါက၊ ၎င်းသည် ၎င်းကို လုံးဝကူညီပေးပါမည်။
ဒီဝဘ်ဆိုဒ်ကို ဝင်ပြီးရင် အရမ်းပျော်တယ်။ ပြီးတော့ ဒီနေရာကနေ ပါဝင်ဖို့ အားလုံးကို အကြံပြုထားပါတယ်။
- ဆိုက်ဘာပန့်ခ် ၂၉
ဤသည်မှာ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော အက်ပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် သင့်အား အခမဲ့ subs များပေးသည်။ ဤအခွဲများသည် အလွန်အသုံးဝင်နိုင်သောကြောင့် ၎င်းတို့ကို အကြံပြုလိုသည်မှာ သေချာပါသည်။
အရမ်းကောင်းတယ်! သင်သည် အချိန်တိုင်း စာရင်းသွင်းသူ 15 ဦးခန့် ရရှိပြီး3ဦးခန့်သာ ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်9မှ အယောက် 30 ကျော်သို့2ရက်အတွင်း ရောက်သွားပါသည်။
လူများကို စာရင်းသွင်းရုံဖြင့် သင့်ချန်နယ်ကို အလွယ်တကူ တိုးပွားစေပါသည်။ ဒါကို စမ်းသုံးကြည့်ဖို့ အထူးအကြံပြုလိုပါတယ်။ သင်နောင်တရမည်မဟုတ်ပါ၊ ဤ site တွင်အလွန်ကောင်းသောဝန်ဆောင်မှုရှိသည်။ လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် အခြားတစ်ခုခုကဲ့သို့ ဤနေရာတွင် စာရင်းသွင်းဝယ်ယူပါက အချိန်တိုအတွင်း ကျော်ကြားလာမည်...
- Enis C
ဝန်ဆောင်မှု ယူကျုချန်နယ်အကဲဖြတ် (ဒေါ်လာ ၁၂၀)
ဝန်ဆောင်မှု ၁ YouTube ဗီဒီယို SEO (ဒေါ်လာ ၃၀) ၃ YouTube ဗီဒီယို SEO (ဒေါ်လာ ၈၀) ၃ YouTube ဗီဒီယို SEO (ဒေါ်လာ ၈၀) ၃ YouTube ဗီဒီယို SEO (ဒေါ်လာ ၈၀)
ဝန်ဆောင်မှု ၁ ချန်နယ်နဖူးစည်းစာတန်းဒီဇိုင်း (ဒေါ်လာ ၈၀) ၁ ဗီဒီယိုအနုစိတ်ဒီဇိုင်း (ဒေါ်လာ ၂၅) ၁ ဗီဒီယိုအနုစိတ်ဒီဇိုင်း (ဒေါ်လာ ၂၅) ၁ ဗီဒီယိုအနုစိတ်ဒီဇိုင်း (ဒေါ်လာ ၂၅)
အခမဲ့ YouTube သုံးစွဲသူများနှင့်သူတို့၏ရုပ်သံလိုင်းကိုတက်ကြွစွာမြှင့်တင်နေသော YouTubers ၁ သန်းကျော်ကိုဆက်သွယ်ပါ။
SubPals '' ဖြန့်ဝေကွန်ယက်ကို အသုံးပြု. အခမဲ့ YouTube ကို subscribers တွေနဲ့သင့်ရဲ့ယှဉ်ပြိုင်မှုအစွန်းရယူပါ!
မူပိုင်ခွင့် © 2022 SubPals (subpals.com)။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။ ရွာေဖြလမ္းညႊန္
သင်၏ YouTube မှတ်ချက်များအပိုင်းကို ကြည့်ရှုသူများအတွက် ဘေးကင်းသော နေရာတစ်ခုဖြစ်အောင် မည်သို့ပြုလုပ်မည်နည်း။
ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအတွက် သင်၏ကိုယ်ပိုင် YouTube စိန်ခေါ်မှုကို စတင်ရန် နောက်ဆုံးလမ်းညွှန်